Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1134
Rugby – «Can 1B » : noraisin’ny Praiminisitra ny Makis
Par Taratra sur 15/06/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Nanome tsodrano ny Makis de Madagascar ny filohan’ny governemanta, omaly. Teny amin’ny biraon’ny minisiteran’ny Atitany no nanaovana izany. Nankahery ny ekipam-pirenena Malagasy sy ireo mpilalao rehetra ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana, mba hitondra avo ny lazan’ny firenena ka handrombahan’izy ireo ny fandresena ho an’ity sokajy “B” ity. Tamin’izany no nanolorany lelavola 5 tapitrisa Ar ho an’ny […]
Faritra atsimo : vonona hanampy amin’ny fambolena ny Onudi
Par Taratra sur 15/06/2016 Divers, NS Français
Ho fanamafisana ny politikan’ny minisiteran’ny Indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina, efa nisy ny fihaonana teo amin’ny solontenan’ny Onudi eto an-toerana, Lorence Ansermet, sy ny minisitra Chabani Nourdine. Naroson’ny minisitra tamin’izany ny laharam-pahamehana nofaritany, hanomezan-toerana ny indostria any ambanivohitra any amin’ny faritra atsimon’ny Nosy rehetra. Izay no vahaolana maharitra hanomezana asa hisian’ny fidiram-bola […]
Foaran’i Sofia : homena vahana ny legioma
Par Taratra sur 15/06/2016 Divers, NS Malagasy
Hotanterahina, ny 7 hatramin’ny 9 jolay izao, any Antsohihy ny foara Mamelono arivo. «Natao hampisongadinana bebe kokoa ny legioma anisan’ny tanjaky ny faritra io hetsika andiany fahefatra io», hoy ny lehiben’ny faritra Sofia, Zaranaina Tohanaina Ernest, omaly tetsy Anosy. Anton’izany ny nanokanan’ny Firenena mikambana ny taona 2016 ho taona iraisam-pirenena ho an’ny legioma. Tanjon’ny foara […]
Kitra – «Cosafa cup 2016» : nisaraka ady sahala ny Barea sy Zimbaboe
Ady sahala samy tsy nisy nitoko no nisarahan’ny Barea de Madagascar sy Zimbaboe, teo amin’ny andro faharoa amin’ny fiadiana ny amboaran’ny “Cosafa cup 2016”, taranja baolina kitra. Fihaonana izay notanterahina tao amin’ny kianja Sam Nujoma, ny alatsinainy lasa teo. Na dia niezaka nanao izay ho afany aza ny Malagasy, tsy nety nahatafiditra baolina mihitsy. Nanohitra […]
Distrikan’i Maevatanàna : hatao ny atrikasa momba ny volamena
Manomboka, rahampitso hatramin’ny 17 jona izao, ny atrikasa ataon’ireo sampana ao amin’ny minisiteran’ny Harena an-kibon’ny tany sy ny solika, any Meavatanàna. Miaraka amin’izany ny Agence nationale de l’or (Anor), Bureau du cadastre minier de Madagascar (BCMM) ary ny Institut de gemmologie de Madagascar (IGM). Tompon’antoka amin’ny atrikasa ny komitim-pirenena momba ny harena an-kibon’ny tany (CNM), […]
Afrobasket Women U18 : mihamafy ny fanazarantenan’ny ekipa nasionaly
Mitohy tsy mijanona ny fanomanantenan’ny ekipa nasionaly hiatrika ny Afrobasket Women U18 2016, any Egypte. Mihamafy hatrany ny fanazarantenan’izy ireo amin’ireo toerana voatokana hanaovana izany. Nambaran’ny manager général-n’ny ekipam-pirenena, Rakotonanahary Ndranto, fa mbola mila ezaka be isika hatreto, indrindra eo amin’ny teknikam-pilalaovana. “Tsy maintsy mbola mamolaka ireo mpilalao isika”, hoy hatrany izy. Na izany aza […]
Fanjakana sy ny tsy miankina : hamafisina ny fifanakalozana amina sehatra rehetra
Nanaovana fivoriana ny 13 jona teo ny fanomanana fihaonana amin’ity volana ity eo amin’ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Tompon’antoka amin’izany ny minisiteran’ny Indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina, tarihin’ny minisitra Chabani Nourdine. Tanjona amin’ny fivoriana hatao, tarihin’ny filoha Rajaonarimampianina Hery, ny fanamafisana ny fifanakalozana eo amin’ny fanjakana sy ny tsy miankina, […]
Nosy manodidina : miantso an’i Frantsa ny ANM
Nambaran’ny filoha nasionalin’ny Fikambanana Nosy malagasy (ANM), Ramaroson Arlette tetsy Antaninarenina, omaly, fa tsy tara akory ny fandraisantsika andraikitra ho amin’ny famerenana ireo Nosy manodidina. “Mitaky ny finoanao sy ny fiarahantsika mientana ny fahatanterahana izany ary hataontsika ao anatin’ny fitiavan-tanindrazana sy ny filaminana tanteraka izany”, hoy ity mpahay lalàna iraisam-pirenena ity. Nanaovany antso avo noho […]
Sokajy «A» : hanala vela amin’i Albania i Frantsa
Hiditra an-tsehatra hiatrika ny andro faharoa amin’ny fifanintsanana isam-bondrona, anio, ny ao amin’ny sokajy «A», eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa “Euro 2016”. Anisan’izany ny Frantsay izay hidona amin’i Albania. Efa tapitra niatrika ny lalao voalohany avokoa izay ireo ekipa 24 miatrika ny «Euro 2016», taranja baolina kitra. Hanomboka amin’ity alarobia ity kosa ny […]
Filohan’ny SMM : “Tsy afa-miteny ny kolikolim-panjakana ny mpitsara”
Mby aiza ihany ny amin’ny raharaha kolikoly eo anivon’ny fitondram-panjakana? Tsy afa-miteny momba izany ny mpitsara… “Zava-misy amin’izao ny hoe kolikolim-panjakana. Tsy manan-kambara loatra izahay sendikà ny amin’izay kolikolim-panjakana izay. Amin’ny maha olombelona ny mpitsara, amin’ny maha olom-pirenena: mahita ny zava-misy amin’izao… “ Io no nambaran’ny filohan’ny Sendikàn’ny mpitsara eto Madagasikara (SMM), Andrianjafimahery Alphonse, teny […]
Fampandrosoana eny ifotony : vita ny biraon’ny kaominina Ambohimahamasina
Par Taratra sur 15/06/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Nivoaka amin’ny fanginany manoloana ireo vaovao samihafa nifamahofaho tato ho ato. « Vita ny asa fanavaozana ny biraon’ny kaominina Ambohimahamasina, ao amin’ny distrikan’Ambalavao. Tsy mitombina ny filazana ny amin’ny tsy fahavitan’izany », hoy ny ben’ny Tanàna, Tsabo Pierre, tetsy Anosy, omaly. Nanamafy sy nijoro nanamarina izany ny ben’ny Tanàna avy amin’ireo kaominina manodidina, toy ny […]
Natao hamonoana… : nampiaka-peo amin’ilay lalàn’ny fifandraisana ny mpanao gazety
Par Taratra sur 15/06/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Tsy nitsitsy fitenenana. «Natao hamonoana ny fahalalahana eo amin’ny asa fanaovan-gazety sy ny olon-tsotra ny andininy faha-20 amin’ilay volavolan-dalàna mifehy ny fifandraisana sy ny serasera, tafiditra ao anatin’izany ny cybercriminalité», hoy ireo mpanao gazety, nivory tetsy Antanimena, omaly. Ho voatohintohina ny fahafahana sy ny fahalalahana raha lany eo io ka hanairana ny sehatra rehetra sy […]
Ambohimirary : maty nokendaina tamin’ny tady ilay tovolahy
Par Taratra sur 15/06/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Ny fatin’ilay tovolahy, mipetra-drery eny Ambohimirary, efa nivalampatra tamin’ny tany, no novantanin’ny mason’ny mpiara-monina aminy raha vao voavoha ny tranony, omaly tolakandro. Mbola hita teny am-bozony ny tady nanakendana azy. Tovolahy iray eo amin’ny 30 taona eo ho eo no hita faty nihohoka tamin’ny tany tao an-tranony, omaly tolakandro tamin’ny 3 ora sy 30 mn […]
Miaramila namono vady : nahazo sazy mihantona iray volana sy onitra 1 tapitrisa Ar
Tsy nahafa-po ireo mpanara-baovao sy ny vahoakan’i Toamasina ny didim-pitsarana momba ity raharahana miaramila namono sy nanao hetraketraka tamin’ny vadiny teo aloha ity. Natao tetsy amin’ny fitsarana ambaratonga voalohany ny fitsarana, omaly. Miaramila miasa etsy amin’ny toby 1/RM3 Analankinina Hopitalibe ity serza sefo voapanga ity. Sazy mihantona iray volana an-tranomaizina sy fandoavana onitra 1 tapitrisa […]
67 ha : ramatoabe toran’ny tsipoapoaka
Ramatoabe iray eo amin’ny 60 taona eo ho eo, torana tampoka noho ny fipoahan’ny tsipoapoaka teny 67 ha, omaly antoandro. Tsy nanampo na inona na inona izy raha nandalo teny an-toerana akaikin’ny fiantsonan’ny taxi-be mihazo an’Ivato. Nisy ankizilahikely nanapoaka tsipoapoaka teo akaikiny ka nahatonga azy ho torana tampoka. Taitra ny olona teny an-toerana raha nahita […]
Analamahitsy : tratran’ny polisy ireo andian-jiolahy niaraka tamin’ny basy PA
Naiditra am-ponja avy hatrany, ny talata teo, ireo andian-jiolahy mampihorohoro eny Analamahitsy sy ny manodidina. Basy PA iray sy antsy ary fonosan-drongony no tratran’ny polisy tany amin’izy ireo… Andian-jiolahy sy mpanendaka miisa 10 indray saron’ny polisy avy ao amin’ny boriborintany fahavalo, ny faran’ny herinandro teo teny Analamahitsy. Araka ny fanazavan’ny polisy, nahazo loharanom-baovao izy ireo fa […]
Rugby – «Can 1B» : feno ny kianja fa matiantoka ny Malagasy Rugby
Par Taratra sur 14/06/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Nampiaka-peo, ny Malagasy Rugby, tamin’ny alalan’ny filohany Rakotomalala Marcel, fa matiantoka izy ireo tamin’ny lalao nikatrohan’ny Makis sy Zambia. Fihaonana natao ny alahady lasa teo, tafiditra amin’ny fifanintsanana hiadiana ny Can 1B. “Feno hipoka ny kianja nefa tsy nisy afa-tsy 50 tapitrisa Ar monja ny vola azo. Anton’izany, ny fisian’ny olona miditra avy any amin’ny […]
Kitra : nahazo fampitandremana mafy i Angletera sy Rosia
Mazava. Namoaka didy fampitandremana ny federasion’ny kitra rosianina sy anglisy ny Union européenne de football association na UEFA, mpikarakara ny Euro 2016, taranja baolina kitra. Hetsika mizotra, amin’izao fotoana izao, any Frantsa. Tsiahivina fa noho ny fifamonoana teo amin’ireo “supporters” teo amin’ny roa tonta nitranga tany Marseille, ny asabotsy lasa teo, no anton’ity didy fampitandremana […]
Kitra – Euro 2016 : nofitahin’ny TVM ny Malagasy mpitia baolina
Nihahaka teo. Raha ny voalaza, handeha mivantana amin’ny TVM avokoa ireo lalao rehetra amin’ny Euro 2016. Nifanohitra tamin’izany ny zava-misy ankehitriny. Nihahaka fotsiny teo ireo mpitia baolina kitra fa tapaka ny fanarahana izany mivantana. Miditra amin’ny andro fahadimy ankehitriny ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa, taranja baolina kitra na ny “Euro 2016”. Fihaonana izay tanterahina […]
Basikety – Mada N1A H/D 2016 : nanarina ny lesoka ny MB2All Analamanga
Par Taratra sur 14/06/2016 Divers, NS Malagasy
Raha ratsy fiditra teo amin’ny fanombohan’ny fifanintsanana amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara taranja basikety, dingana voalohany, sokajy N1A lahy sy vavy, ny MB2All (Analamanga), nanarina izany izy ireo teo amin’ny andro fahatelo, omaly. Fifaninanana tanterahin’ny federasiona malagasy (FMBB) miaraka amin’ny ligin’i Diana ary ny orinasa Telma, mpanohana ny basikety malagasy, any Antsiranana, ao amin’ny kianja […]
Tahiry Serasary : hamidy any ivelany ny « film » tsara indrindra
Par Taratra sur 14/06/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Manokatra lalana ny sarimihetsika malagasy hahazo toerana eo amin’ny tsena iraisam-pirenena, izany hoe ho hitan’izao tontolo izao toy ireny « film » tandrefana ireny, ny Tahiry Serasary. Miisa enina ny horonantsary malagasy efa nahazo tombony tamin’izy ity. Ampanarahina ny fenitra iraisam-pirenena ny kalitaon’ny vokatra ka vola avy amin’ny Serasary no hanatontosana izany. Marihina fa horonantsary fohy (latsaky […]
Atletisma – Mada Jeunes 2016 : voalohany Atsimo Andrefana, nahazo medaly 56
Nanjakan’Atsimo Andrefana ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara, taranja atletsima, sokajy zandriny, ny faran’ny herinandro teo, teny amin’ny kianjan’Alarobia. Nandrombaka ny laharana voalohany izy ireo, nandroaka medaly 56. Ny 20 tamin’ireo, volamena avokoa, 19 volafotsy ary 26 alimo. Saika nahazoan’ireo atleta avy amin’ity ligim-paritra ity medaly avokoa ireo taranja-pifaninanana niadiana tamin’izany. Ankoatra izay, tany amin’ny laharana […]
Fianarantsoa : irosoana hatrany ny oniversite nomerika
Par Taratra sur 14/06/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Miroso hatrany amin’ny oniversite nomerika ny ao Fianarantsoa. Nandritra ny fametrahana amin’ny fomba ofisialy ny oniversite vaovao, maro sosona ihany koa ny fitokanana natao. Anisan’izany ny tabilao nomerika lehibe hampitana ireo vaovao rehetra tsara ho fantatra ao amin’ny oniversite sy ny zava-mahaliana mitranga maneran-tany mety mahaliana ny mpianatra. Nisy ihany koa ny fanavaozana ny kianjan’ny […]
“Tafaray samy tia” : tsara fandray an’i Dadah sy Fafah ireo mpankafy any Frantsa
Par Taratra sur 14/06/2016 Actualités
Nahafaly ireo mpijery ny seho efa tontosa. Mbola maromaro kosa ny seho hataon’i Dadah sy Fafah mandritra ny fihodinana izay hataon’izy ireo any Frantsa… Nanomboka tetsy amin’ny CCEsca Atanimena tamin’ny fetin’ny mpifankatia… Mitohy hatrany kosa ary lasa nentin’i Dadah sy Fafah nihodina any ivelany amin’izao fotoana izao ny “Tafaray samy tia”. Tsara fandray ireto andrin’ny […]
« Précédent 1 … 1 132 1 133 1 134 1 135 1 136 … 1 273 Suivant »